Chiitiko che chatbots mune zvemagetsi commerce | ECommerce nhau
Chiitiko che chatbots mune zvemagetsi zvekutengeserana
Nei chatbot iri mushandi akanakisa yako e-commerce inogona kuva nayo? Ngatitangei netsananguro: chatbot isoftware inokwanisa kutaura nevatengi, zvese neshoko uye nekunyora, kutevedzera maitiro evanhu. Ndokunge, robhoti ichataura kana kunyorera vatengi vayo pavanenge vachida kuti vagadzirise kusahadzika kwavo vese vasina kumborasa moyo murefu.
Mushandi akakwana! Yako wega Siri kungori kune rako bhizinesi. Chat bots inowanzo shandiswa kuburikidza neyekutumira mameseji senge Facebook Messenger, Skype, kana Teregiramu.
Zviri pachena kuti rinotyisa sei chatbot mutengi webasa chishandiso uye uye kuti yakanaka sevhisi sevhisi chinhu chinosarudza kana zvasvika pakuburitsa kubatanidzwa, kuvaka vatengi kuvimbika, uye kuona kudzokorodza kutengesa. Ini ndinotengesa iwe wave kutoda wako mutsva online chitoro mushandi zvakanyanya uye nekuwedzera!
1 Zvakanakira nekukanganisa kwema chatbots e-commerce
2 Dzimwe nzira dzekushandisa
3 Rutivi rwerima rwe chatbots
4 Unogona kuwana mhando dzakasiyana dze chatbots ...
5 Chii chatbots?
7 Nei Kukurukurirana Zvekutengeserana Zvinhu
8 Kurudzira vatengi vako kuti vagovane data
9 Shingairira yako brand
Zvakanakira nekukanganisa kwema chatbots e-commerce
Chakanakira chikuru ndechekuti yako sevhisi sevhisi inowanikwa maawa makumi maviri nemana pazuva, uchishanda usinga mire-e-commerce yako. Nekudaro, kune zvimwe zvimwe zvinhu zvinogona kukubatsira iwe kuvandudza bhizinesi rako. Ngatizvionei kubva zvino zvichienda mberi:
Yese mabhenefiti ekushandisa chatbot kune rako bhizinesi
Iyi software inounza mabhenefiti akati wandei kune yako e-commerce: Iyo chatbot inogadzirisa hurukuro iyo ingadai iri iro basa remushandi chaiye. Zvakare, iye mushandi angawanzo kuneta mushure mekudzokorora iyo imwecheteyo hurukuro kakawanda.
Zvinonyanya kubatsira kushandisa (vanhu) zviwanikwa kuita akasiyana mabasa, iwo asingadzokorore zvishoma uye anowirirana nebhizinesi rako.
Vese vatengi vako, chero nguva uye kubva chero kupi pasi, vanozopihwa nekukasira uye vanozopihwa ruoko rwekutanga-ruoko. Vakatadza sei kugutsikana? Hakuna imwe nzira irinani.
Kunyangwe pakubata nevatengi vakawanda panguva imwe chete, iyo chatbot haina kana zvikanganiso. Muchokwadi, inounganidza rumwe ruzivo nezve vashandisi iyo inogona kushandiswa mukubvunzurudza mune ramangwana (nekuda kweayo makuki anozivikanwa). Uyezve, hautombotsamwa, kunyangwe zvasvika kune vatengi vane hutsinye.
Dzimwe nzira dzekushandisa
Zviripachena kuti mukana mukuru unobva pakushandisa bot yekushandira vatengi, handiti? Asi kune dzimwe nzira dzinogona kushandiswa kuwana zvakazara mairi: Kusimbisa uye kuteedzera odha. Semuenzaniso, aya ndiwo maitiro eDominoes anobata maodha muUS.
Kukurudzira zvigadzirwa. Funga nezve kana kufamba kwekambani yako iine chiito chekudzokorora chinogona kugadziriswa. Edza chatbot nezviito izvozvo kuti uone kana zviri izvo ecommerce yako inoda.
Rutivi rwerima rwe chatbots
Haasi ese anopenya ndarama kana uchitaura nezve ino temu. Heano zvimwe zvakaipa zveichi chishandiso. Isu hatisi kungotaura nezve iyo yemari mamiriro (kune mamwe ma chatbot mapuratifomu ayo anopa emahara zvirongwa, senge Dialog Kuyerera, Google chikuva chekugadzira chatbots).
Pamusoro pemutengo, inofanirwa kutariswa kuti yega bot inofanira kugadziridzwa munzira yakasarudzika yebhizinesi rega rega, uye inofanira kuvandudzwa. Izvi zvinogona kureva kuwedzera mari yekudzidzira (kana iwe uchida kuzviita iwe pachako) kana kuhaya wechitatu bato (kana iwe uchida kuti mumwe munhu akuitire iwe).
Kana iyo chatbot isina mhinduro yakarongwa kumubvunzo wakatarwa kana kusahadzika, kana isina ruzivo rwakakosha, inogona kunamatira kana kumanikidza mushandisi kudzokorora mubvunzo kakawanda.
Kana izvi zvikaitika kazhinji, vatengi vanoora mwoyo vobva vasiya mushure mekuita zvakashata mushandisi ruzivo.
Kana iyo bot yaunoshandisa iri yekutaurirana uye yakavhurika, ruzivo rwunozoita nani mushure mekumwe kumwe kushandiswa, asi kuitiswa kwayo kunonyanya kuoma (uye kunodhura).
Imwezve tsananguro nezve inofungidzirwa kusagadzikana iyo isipo chaizvo. Kunyangwe iwe uchigona kufunga kuti vatengi havana kugadzikana kutaura nemuchina, iyo data inotaura neimwe nzira.
Chidzidzo chakaitwa naUbisend pane chatbots mu2017 chakapa zvinotevera (zvinoshamisa) mhedzisiro. 1 mu5 vatengi vari kuda kutenga zvinhu nemasevhisi kuburikidza ne chatbot. 40% yevatengi havangodi chete kuzviita, asi zvakare kuda kugashira chaiwo zvipo kubva kune bot. Pamusoro peizvozvo, uye kana iwe uchine kusahadzika, zvinoenderana naHubspot:
71% yevatengi vanoshandisa chatbots kugadzirisa matambudziko ane chekuita nekutenga. 56% vanosarudza kutumira meseji pane kufonera iyo nhamba yebasa revatengi.
Naizvozvo, chat bots haisi chete inobatsira zvine hungwaru, asi zvakare batsira kutyaira chaiko kutengesa.
Unogona kuwana mhando dzakasiyana dze chatbots ...
Isu tinofanirwa kutora nhanho kumashure kuti tinzwisise kuti chatbots dzinoiswa sei. Nhanho yapfuura yaive iyo bot, software iyo inokwanisa kuita basa zvoga. Ivo vanga varipo kwenguva yakareba, kunyangwe email yekushambadzira maneja inogona kutariswa bot. Ye chatbot ibhoti yakanyatsogadzirirwa kutaura nevashandisi.
Akanyanya kuwanda ndeaya:
Vhura chatbot: zvichibva pahungwaru hwekunyepedzera uye unodzidza kubva mukubatana kwako nevashandisi.
Yakavharwa chatbot: inogona chete kuita hurukuro nemhinduro dzakatemwa uye haigone kudzidza kubva mukubatana.
Inotungamirwa Chatbot - Vashandisi havagone kupindura vakasununguka, pachinzvimbo ivo vanofanirwa kusarudza uye tinya pane dzimwe mhinduro dzakatsanangurwa dzakapihwa ne chatbot.
Kutaurirana Chatbot - Vashandisi vanogona kutaipa mune chero mubvunzo uye vozvitumira kuchatbot, iyo inopindura zvakafanana kune chaiye munhu.
Sarudzo yeimwe kana imwe sarudzo zvinoenderana nezvinangwa uye nevateereri vanozobatana ne chatbot. Izvo zvakare zvinokwanisika kuzvibatanidza uye kushandisa zvese mhinduro dzakavhurika uye mabhatani akafanotaurwa.
Kuzivikanwa kukuru uye pesvedzero yemagariro enhau zvakagadzira mukana mukuru wevateereri kuti vatenge kuburikidza nemapuratifomu enharaunda. Unogona, unogona, iwe unofanirwa kubatanidza chatbot mune yako dijiti mutengi ruzivo? Mubvunzo uyo vatengi vedu vanotibvunza isu zvakanyanya uye kazhinji. Mhinduro yedu pfupi ndeyekuti: EHE!
Kana iwe usiri kujairana neakararama chats kana chatbots, isu takanyora pazasi rukuru ruzivo iwe rwaunoda kuziva.
Chatbots chimiro che "smart mubatsiri" tekinoroji, saSiri kana Google Mubatsiri. Nhoroondo, vakatarisa pane rimwe basa mukati mesangano.
Parizvino, pane maviri marudzi e chatbots: yakajairwa chatbot uye akangwara chatbot inofambiswa nemuchina kudzidza uye hwekunyepedzera ungwaru (AI).
Iine AI uye kusimudzira kweNLP (yakasikwa mutauro kugadziriswa), chatbots ave kuita chinoshamisa chishandiso chinotora pamusoro pevatengi kudyidzana uye zvakanyanya kudhijitari kushambadzira. Ingobvunza Google uye iwe unowana zvinopfuura mamirioni zana mhedzisiro.
Chatbots inogona kupindura zvinobudirira kune isina muganho nhamba yewebhu vashandisi panguva imwe chete. Izvo zvoga, zvinopa 24/7 rutsigiro, uye iri sarudzo yakachipa pane kubhadhara vashandi kuti vaongorore mibvunzo. Nguva yekupindura inoitika ipapo, mune chero nguva yenguva. Ivo vanogona kutaura kwemaawa pasina kudikanwa kwekutarisirwa kwevanhu.
Nekudaro, chatbots zvakare zvirongwa zvemakomputa. Ivo chete vakanaka sekodhi yakavasika. Naizvozvo, zvakajairika chatbots haigone nguva dzose kunzwisisa izwi rakapereterwa zvisizvo kana kupindura isina kukwana mubvunzo wevanhu. Havazove nekwanisi yekufunga kunze kwebhokisi. Ruzivo chete rwavanarwo idhata ravakatogadzirirwa naro.
Apa ndipo panofanirwa kuitirwa mashiripiti eAI kushandura kudyidzana kwekombuta, sekuiziva kwedu. AI-powered chatbots anokwanisa kunzwisisa zvinoreva chirevo, kwete chete ayo akakosha mazwi. Ivo vanodzidza kubva pamashoko asina kunyorwa zvakanaka, zvakafanana, uye ontologies. Ivo zvakare mitauro yakawanda. Inonakidza kwazvo!
Nei Kukurukurirana Zvekutengeserana Zvinhu
Chii chakasarudzika nezve chatbots ndechekuti dzinogona kuve nyore kubatanidzwa mune dzakasiyana siyana dzevatengi-bhizinesi kudyidzana, pamatanho ese eiyo faneli. Izvi zvinonatsiridza ruzivo rwevatengi, semuenzaniso, munzira dzinotevera:
Kwazisa vangangoita vatengi uye bvunza kana vaine chero mibvunzo
Yeuchidza vangave vatengi nezve ngoro dzakasiiwa
Bata vatengi uye wedzera peji nguva
Unganidza yekutanga-ruoko data kubva kune vangangove vatengi
Endesa zvirimo uye zvigadzirwa kune vatengi zvichibva pane zvavanofarira
Ipa nekukurumidza kutsigira kwevatengi maawa makumi maviri nemasere
Zivisa vatengi nezve kukwidziridzwa uye zvinopihwa
Shingairira chiratidzo chako (hongu, ndiko)
Ngatione zvakadzama kuti imwe neimwe yadzo inoitwa sei:
Mabhodhi anokwazisa vatengi vako pane yako saiti anoita akati wandei akakosha mabasa anogona kuvandudza zvakanyanya ruzivo rwevatengi. Kutanga, kana mutengi achidzoka uyo akambozvizivisa ivo kune bot anoshanyira saiti, iyo chatbot inogona kuvakwazisa nemazita uye kuvapa izvo zvigadzirwa zvazvino zvinogona kukodzera zvido zvavo. Nekuda kweizvozvo, vatengi vako vachanakirwa nekushanyira yako eCommerce saiti zvakanyanya, izvo zvinove zvine simba zvakanyanya pakutengesa kwako uye mari.
Chechipiri, chishandiso chakakosha kuunganidza yekutanga-ruoko data, chaiyo chaiyo mhando yedata, sezvo ichipihwa yakanangana nemushandisi uye ichiigamuchira nemvumo yavo, pachinzvimbo chekuitenga muhuwandu hwechipiri kana chechitatu.
Chikurukuru, ruzivo rwevashandisi runogona kuverengerwa zvichienderana nenzvimbo yawakaratidza. Localization ndeimwe nzira inoshanda yekuwedzera kutengesa. Chidzidzo chakaitwa neCommon Sense Advisory chinoratidza kuti vanhu havawanzo kuda kutenga mumitauro isiri yemitauro yemuno. Vatengi havadi kushandisa mari pazvinhu zvavanosungirwa kunyatsonzwisisa. Chatbots iyo inogona kutaurirana mumutauro wevatengi inogadzirisa iri dambudziko zvakanyanya.
Ipa vatengi vako zvinyoro nyoro kuti vatenge. Vanhu vanosiya ngoro dzavo nguva dzose, chinhu chinowanzoitika pane ese e-commerce mapuratifomu. Nekudaro, yega yega saiti inofanirwa kuyedza kudzikisira chiyero icho vatengi vayo vanoisa zvavanotenga pamusoro kana kungokanganwa nezvavo.
Sekureva kweshumo rakaburitswa neSaleCycle mu2018, vatatu-vatatu vevatengi vepamhepo vanosiya zvavo ngoro online. Chat bots inogona kubatsira kudzikisira kuitika uku.
Makambani mazhinji anosarudza kuzivisa avo vangangove vatengi nezvekutengesa vangangodaro vakakanganwa kupedzisa nekubata navo neemail. Nekudaro, kutsvagurudza kunoratidza kuti ma chatbots ane click-kuburikidza nemitengo (CTRs) ayo ari mashanu kusvika kagumi akakwirira kupfuura ayo eemail marketing.
MaChatbots ane mukana wekuva nehurukuro yekutaurirana uye yehushamwari, kutaura nevatengi zvakananga pawebhusaiti, uye kazhinji kuvabatsira nematambudziko avanogona kunge vakasangana nawo pakutanga izvo zvakavatadzisa kuita kutenga pakutanga. Zvinotonyanya kukosha - vanogona kuzviita chero nguva yezuva, kana mutengi achida kushandisa webhusaiti yako.
Dzimwe nguva izvo vatengi zvavanotsvaga ingori nudge diki yekutenga zvigadzirwa zvavanoda - chimwe chinhu senge promo kodhi kana coupon iyo inovapa iyo 5% kubva pakutenga kwavo kwekutanga, kana 7% kuvimbika kushomeka. Chat bots inogona kuzviita kana vatengi vari kuongorora saiti, ichivapa iwo mukana wakakura pamusoro pekutengesa email.
Kurudzira vatengi vako kuti vagovane data
Yekutanga-pati data iri kuwedzera. Ndiyo chaiyo yakajeka uye inehunhu mhando yedata, sezvo mushandisi achibvuma kuipa iyo. Chatbots inzira yakanaka yekukurudzira vatengi vako kuti vagovane zvavanofarira uye nhare dzekubata kuti vaone zviri nani ruzivo rwavo rwekutenga.
Apa ndipo panogona kutaurirana mabhatani nehupamhi hwakawanda hweimwe migero kuti uve nechokwadi chekugona kukuru kwekushambadzira kwako. Semuenzaniso, nekutora nhamba dzenhare dzevatengi vako kuburikidza ne chatbots, unogona kuvabatanidza nekutengesa mameseji uye kuvapa zvipo zvakakosha, maSMS ezvipo, makadhi efoni, notisi dzehurongwa dzakadai sekusimbiswa kwekuendesa.
Vamwe vanhu vanogona kusasununguka kugovana manhamba avo, asi ivo vanonyanya kuda kugovana maakaundi enhau enhau, inova zvakare nzira huru yekuchengetedza vatengi vako pamusoro pezvipo zvega. Tichifunga nezvekuti vanhu vanoitira hanya zvakadii nezveFacebook Messenger mameseji, iyi svikiro ine chiyero chakavhurika icho chingangoita 250% pane izvo kushambadzira kweemail kunopa, pamwe nekukwirisa 620% yepamusoro yekukanda-kuburikidza nemutengo.
Batsira vatengi vako neruzivo rwavanokoshesa. Chat bots chinhu chakakosha kana iwe uri kuyedza kuongorora kuita kwako sechishandiso chekukwezva vako vatengi. Chatbots dzinogona kupa vatengi vadzo zvemukati zvinoenderana nevatengi vavo, zvichibva pane yekutanga-ruoko data iyo yavanounganidza ivo pachavo.
Kunyanya kana ecommerce chikuva chako chichiita mukati meimwe niche kana indasitiri, vatengi vako
Kugara uchivapa wongororo pazvinhu zvazvino zvigadzirwa mune ino niche haingovabatanidze chete nekambani yako uye kusimbisa kuvimba, asi zvakare zvinokuita iwe mumwe wevatungamiriri vanofunga muindasitiri vane maonero ane basa.
Shingairira yako brand
Mabhoti anogona kazhinji kukanganiswa nezvidimbu zvisina hupenyu zve software, asi bot inopfuura kungova bot. Makambani akabudirira kubatanidza chatbots mukushambadzira kwavo vakavimbisa kuti michina yavo midiki ine hunhu.
"Paunenge uchiedza kuuya nehunhu, tora nguva uone kuti ndehupi hunhu hwake, sekutya kwake, zvaanofarira, nezvimwe." "Zvakafanana nenzira iyo makambani anosvika pakushambadzira vanhu." - Jenna Bright, Wemukati Wekushambadzira Nyanzvi uye Munyori Mukuru paTrust My Pepa.
Paunenge watsanangura hunhu hwe robhoti yako, iwe unofanirwa kutsvaga toni chaiyo uye mazwi echirobhoti. Izvi ndezvekugadzira yakawanda "yemunhu" chiitiko. Ongorora zvinhu izvo vatengi vako vanogona kunakidzwa. Iyo bot inogona kunge iine mazwi ekumaodzanyemba, pano neapo ichidonhedza "y'all" mukubatana kwayo nevashandisi, kana inogona kunge iri yakawanda Gen Z-yakatarisana bot inoshandisa mutauro wazvino kupa vateereri vayo vadiki.
Nekudaro, iyi nzira kune yako chatbot ichakubvumidza iwe kugadzira yako brand, ichigadzira yakadzika uye zvine chinangwa kudyidzana pakati pewe ecommerce saiti yako uye vatengi vako.
Chatbots anogona zvirokwazvo shandura vatengi vako 'ecommerce ruzivo, uye ikozvino zviri kwauri kuti uzvibatanidze ivo mukushambadzira kwako kuedza. Iye zvino ivo chinhu chakakosha chebhizimusi chero ripi zvaro rinotarisa kugadzirisa nekuwedzera mhedzisiro yaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Chiitiko che chatbots mune zvemagetsi zvekutengeserana
Dhizaini Yangu akadaro
Tsananguro yakanakisa, ndanga ndichiverenga nekutsvagisa nezve chatbots kwenguva yakareba, kunyanya ecommerce, asi ini ndinoona iro danho reruzivo mutsamba iri rinonakidza kwazvo, chokwadi ndichave ndichigovana pasocial network
Pindura kune MyDesign